जब दिल्ली–बैंग्लोरको हवाईरुटमा पाँच वर्षे बालक एक्लैले यात्रा गरे...! Bizshala -
जब दिल्ली–बैंग्लोरको हवाईरुटमा पाँच वर्षे बालक एक्लैले यात्रा गरे...!
सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुरु गरेको भारतमा उडानमार्फत विभिन्न गन्तब्य जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या ५८ हजार ३१८ पुगेको भारतीय उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सोमबार देशका विभिन्न स्थानबाट कूल ८३२ उडान गरिएको थियो ।
बैंग्लोरमा शर्माकी आमाले उनलाई रिसिभ गरेकी हुन् ।
सोमबार जब विहान बैंग्लोर एयरपोर्टमा पुग्दा उनकी आमा छोराको प्रतिक्षा गरिरहेकी थिइन्, उनले एएनआईसँग कुरा गर्दै छोरा दिल्लीबाट आएको जहाजमा एक्लै आएका विमानका कर्मचारीले आफूलाई बताएका जानकारी गराइन् ।
बिहान शर्मा केही दिनको छुट्टीमा दिल्लीमा रहेका आफ्ना हजुरबुवा र हजुरआमालाई भेट्न गएका समय लकडाउन भएपछि उनी तीन महिनासम्म आफ्नो काखबाट टाढा रहेको उनकी आमाले बताइन् ।